မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 09/01/2009 - 10/01/2009
Koko ni iru yo / I'll be right here/ ငါဒီမှာ ရှိနေမယ်...
ငါဘယ်မှ မသွားပဲ နင့်ကို စောင့်မယ်..
အဲဒါကြောင့် နင်ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့နော်…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ နင်ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးတဲ့နေရာကိုပဲ ရောက်နေနေ… ငါ့ နှလုံးသားက ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်လို့ပဲ…
ငါပြောချင်တာကို နင် သဘောပေါက်တယ်မှတ်လား…
ငါ နင့်ကို (အမြဲ) စောင့်နေမယ်…
ငါက ငတုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်… ခုတော့ နင်နဲ့ အဝေးကြီးမှာ ရောက်နေပြီ…
ငါ့ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေ မပြောင်းလဲဘူးဆိုတာကို ငါပြောချင်ခဲ့ပင်မဲ့… (အဲဒိအချိန်တုန်းက)နင် ထွက်သွားခဲ့တယ်…
ခုတော့ Album စာအုပ်ထဲက နင့်ပုံလေးတွေပဲ ငါ့မှာရှိတော့တယ်…
ခုဆိုရင်.. နင်နဲ့ ငါ ရေဒီယိုလှိုင်းတွေနဲ့ပဲ တွေ့ဆုံနိုင်တယ်နော်…
ဒါပေမဲ့ ဒီနည်းနဲ့က နင့် အပြုံးတွေကို ငါမမြင်ရဘူးလေ…
နင်ရဲ့ နွေးထွေးမှု… နင့်ဆံပင်လေးတွေရဲ့ သင်းရနံ့လေးတွေ(ကို မခံစားရတော့)…
ငါ့စိတ်ထဲက နင့်ကို တောင့်တနေတဲ့ ခံစားချက်ကို မဖြေသိမ့်နိုင်ပါဘူးဟာ..
နေ့တွေ ဖြတ်သန်းလာတာနဲ့ အမျှ… နင့် အရိပ်တွေကို ငါ မက်မက်မောမော ရှာဖွေနေမိတယ်…
ခုဆိုရင် နင်နဲ့ လျှောက်နေကျ လမ်းလေးမှာလဲ.. ငါ့ခြေသံလေးတွေရဲ့ ပဲ့တင်သံလေးတွေပဲ ကျန်တော့မှာပေါ့နော်…
ဒါနဲ့ နေပါအုံး… နင်ရော နေကောင်းရဲ့လား… ထမင်းမှ မှန်မှန်စားရဲ့လား…
အာ… Damn.. ခုထက်ထိ ငါဘာပြောရင် ကောင်းမယ်ဆိုတာ ခေါင်းထဲပေါ်မလာသေးဘူးဟာ…
ကြည့်ရတာ… ဒီစာကို ငါ နောက်မှပဲ ပို့ဖြစ်တော့မယ်ထင်ပါတယ်…
ကမကုရာမှာ ကမ်းခြေကို နင်လှမ်းကြည့်နေတုံးက…
အဲဒိလှိုင်းလုံးတွေက ငါပြောချင်ခဲ့တဲ့ စကားတွေကို ၀ါးမြိုသွားခဲ့တယ် ဆိုတာ နင်သိရဲ့လား…
ငါက ယောကျာင်္းတစ်ယောက်ပါ… ဒါပေမဲ့ ဘာလို့ ဒီ စကားလုံးတွေ ငါ့ပါးစပ်က ပြောမထွက်ခဲ့တာလဲ…
နင်မှတ်မိသေးလား… ငါတို့တွေ အတူတူ ကာရာအိုကေ သွားဆိုတုန်းကလေ…
တီဗွီ(မော်နီတာ) ပေါ်မှာ ပေါ်လာတဲ့ ငါရွေးခဲ့တဲ့ သီချင်းစာသားတွေက…
တကယ်တော့… ငါနင့်ကို အရိုးသားဆုံး ၀န်ခံချင်ခဲ့တဲ့ စကားတွေပေါ့ဟာ…
ငါတို့ ၂ယောက်ထဲ ပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့နေ့ကလေ…
ငါတို့ တနေကုန်ပျော်ခဲ့ကြတယ်… မသိရင်တော့ မတော်တဆ နင်နဲ့ ဆုံခဲ့ သလိုလို ငါဖန်တီးခဲ့တာ…
အဲဒိနေ့က နင့်အပြုံးတွေကို ငါဘယ်တော့မှ မေ့လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး…
ကဲပါလေ… ငါလဲ မဆိုင်တာတွေ ပြောနေမိပြန်ပြီ…
ဒါပေမဲ့ ငါဘာပြောဖို့ကြိုးစားနေတယ်ဆိုတာ နင်သိတယ်မှတ်လား….
Shit… (စာရေးနေရင်းနဲ့…) ရေးစရာ နေရာတောင် မကျန်တော့ဘူး…
ဆော်ရီးဟာ… နောက်တစ်ခေါက်ကျရင်တော့ ငါဒီစာကို ဆက်ဆက် ပို့ပါ့မယ်…
ဘာလို့လဲဆိုတော့ နင်ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးတဲ့နေရာကိုပဲ ရောက်နေနေ…
ငါ့ နှလုံးသားက ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်လို့ပဲ…
ငါ နင့်အတွက် အရာရာတိုင်းကို စွန့်လွှတ်ရပါစေ… ငါလုပ်နိုင်ပါတယ်…
တကယ်လို့ ငါ့မှာသာ ဒီထက် ပိုက်ဆံပိုရှိခဲ့ရင်… ငါ့မှာသာ အလုပ် အတည်တကျရှိခဲ့ရင်ကွာ…
အဲဒါကြောင့် ငါ့ကို နင်အထင်မလွဲပါနဲ့… နင် အထီးကျန်အောင် လုပ်မိတဲ့ ငါ့ကိုယ်ငါလဲ မုန်းမိပါတယ်… ဒါပေမဲ့ဟာ….
ငါအခု အလုပ်တွေ များနေတော့ နင်နဲ့ စကားကြာကြာ မပြောနိုင်ဘူး..
ဒါတွေ အားလုံးကလဲ ငါတို့ ၂ယောက် အနာဂတ်ကောင်းဖို့လုပ်နေတယ် ဆိုတာကိုတော့ ယုံပေးပါနော်…
ငါအမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင်… ခု ချက်ချင်းပဲ နင့်ကို တွေ့ချင်နေတယ်… ငါ့ရင်ခွင်ထဲမှာ နင့်ကို တင်းကျပ်နေအောင် ဖက်ထားချင်တယ်…
နင်ထိုင်နေကျ ငါ့ဘေးကထိုင်ခုံလေးက ခုထက်ထိ လစ်လပ်နေဆဲပါဟာ…
ကဲပါလေ… ဒါတွေက အရေးမကြီးပါဘူး…
ခုချိန်မှ ပြောလဲ နောက်ကျကောင်း နောက်ကျနေလိမ့်မယ်ဆိုပေမဲ့…
ငါတစ်ချိန်လုံး ပြောချင်နေခဲ့တဲ့ စကားတွေပါတဲ့ ငါ့ရဲ့ မပို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ စာကို ဒီတစ်ခေါက်တော့ ပို့လိုက်ပါ့မယ်….
ကောင်မလေးရေ… ငါ ဒီမှာရှိနေတယ်နော်….
ငါဘယ်မှ မသွားပဲ နင့်ကို စောင့်နေတယ်နော်…
ငါနင့်ကို ချစ်တာ နင်သိပါတယ်…
အဲဒါကြောင့် နင်ဘာမှ စိတ်မပူနဲ့…
ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးကွာနေပေမဲ့… ငါ့နှလုံးသားက ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး…
အချစ်ရေ… ငါ ဒီမှာ ရှိနေတယ်နော်…ငါလဲ နင့်ကို ဘယ်မှ မသွားပဲ စောင့်နေတယ်…
ဒါကြောင့် နင်ဘာမှ မစိုးရိမ်နဲ့နော်…
ဘယ်လောက်ပဲ ဝေးဝေး ငါ့နှလုံးသားက မပြောင်းလဲသွားပါဘူး..
ခုတော့ ငါပြောချင်တာတွေ နင့်ကို ငါပြောနိုင်ပြီ...
I don't ever wanna let you go...
(ငါနင့်ကို ဘယ်တော့မှ မခွဲချင်တော့ဘူးဟာ...)
အပေါ်မှာ ရေးသွားတဲ့ စာသားပုံစံတွေကို ဖတ်ကြည့်တာနဲ့ ဒီဟာက ကဗျာမဟုတ်ဘူး... ၀တ္တုတိုလဲမဟုတ်ဘူး... သီချင်းစာသားဆိုတာ ခန့်မှန်းလို့ရမှာပါ... ဂျပန်သီချင်း KoKo Ni Iru Yo (ကိုကိုနီအီရူယို) အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် (I'll be right here)လို့ အဓိပ္ပါယ်ရတဲ့ သီချင်းက စာသားလေးတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံး အနီးစပ်ဆုံးနဲ့ ဖတ်ရအဆင်ပြေအောင် ဘာသာပြန်ထားတာပါ... (အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ ပိုဖတ်ရ အဆင်ပြေပါတယ်... မြန်မာလို တတ်နိုင်သလောက်ဘာသာပြန်လိုက်လို့ သီချင်းအဓိပ္ပါယ်ပေါ့သွားခဲ့ရင် စိတ်မကောင်းပါဘူး... ဒါပေမဲ့ အားလုံးအတွက် အဆင်ပြေအောင် ပြန်ပေးလိုက်တာပါ...)
စာသားလေးတွေက အရမ်းကို romantic ဆန်သလို သံစဉ်နဲ့ သရုပ်ဆောင် MTV လေးကလဲ အလွန်မှ ကောင်းပါတယ်... Rap အဆိုတော် Soulja ရဲ့ သီချင်းပါ... အောက်က Youtube ဗွီဒီယိုမှာ ခံစားကြည့်ပါ...
ဒီ MTV လေးကို စကြည့်ချိန်က အစပ်ဆက်မရှိဘူးလို့ခံစားရတယ်... ကောင်မလေးက လုပ်ချင်တာတွေလုပ်နေတယ်... အဖွားကြီးကို ပြုစုတယ်... စားပွဲထိုးတယ်... တစ်ယောက်ထဲ ဘတ်စ်ကားစီးတယ်... ကောင်လေးကကျတော့ စတီဒီယိုထဲမှာ သီချင်းဆိုနေတယ်... နောက်ဆုံးလေးကျမှ ကောင်လေးစာကို ကောင်မလေးဖတ်ရပြီး ဖုန်းပြောတဲ့အခန်းမှ ၂ယောက်ဆက်သွားတယ်လို့ ထင်နေတာ... ဒါပေမဲ့ ဒီ MTV လေးကိုကြည့်နေတဲ့ အချိန်မှာ တမျိုးလေးခံစားရတယ်... သီချင်းစာသားလေးတွေနဲ့ ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ စို့စို့နစ်နစ် ခံစားရတယ်... အဲဒါဘာကြောင့်လဲ... သူတို့ရဲ့ တင်ပြပုံက ဘာလို့ ပရိတ်သတ်ကို ခံစားချက်တစ်ခုပေးနေတာလဲလို့ သေချာစဉ်းစားလေ့လာကြည့်မိတယ်... တကယ်တော့...
သီချင်းရဲ့အစပိုင်းမှာ ဖုန်းလေးစမြည်နေတဲ့ အချိန်မှာ ကောင်လေးက စတီဒီယိုအခန်းထဲ ၀င်သွားလို့ မသိလိုက်ဘူး... အဲဒိအခါမှာ ကောင်မလေးက စိတ်ပျက်သွားတယ်... ဒါပေမဲ့ သူမလုပ်နေကျ နေ့စဉ်အလုပ်လေးတွေကို ဆက်လုပ်နေခဲ့တယ်... ကောင်လေးကို သတိရနေတယ်... တစ်ခါတစ်ခါ သူမအားရင် ကြိုးစားပြီးဖုန်းခေါ်ကြည့်တယ်... ဒါပေမဲ့ ကောင်လေးက စတီဒီယိုထဲမှာပဲ ရှိလို့ မကိုင်ဖြစ်ဘူး... ကောင်မလေးက စိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်... နောက်ဆုံးခန်းကျမှ ကောင်လေးက စတီဒီယိုထဲက ထွက်လာပြီး ကောင်မလေးကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်... တချိန်တည်းမှာပဲ ကောင်မလေးကလဲ ကောင်လေးစာကို ဖောက်ဖတ်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်နေတယ်... နောက်ဆုံးကောင်မလေးက ကြည်နူးပြီး ငိုတယ်... ဒီကြားထဲမှာလဲ ကောင်လေး Rap ဆိုနေတဲ့ အချိန်မှာလဲ သူတို့ ၂ယောက်ရဲ့ အတိတ်က အရိပ်လေးတွေနဲ့ ဖြည့်စွက်ထားတယ်...
တချို့ ဗွီစီဒီတွေလို သီချင်းနဲ့ သရုပ်ဆောင် စပ်ဆက်မှုမရှိပဲ... သရုပ်ဆောင်မင်းသမီးတွေ လျှောက်ပြေးပြ... လှုပ်ပြ.. မင်းသားနဲ့ လမ်းလျှောက်ပြနေတာမဟုတ်ပဲ... သီချင်းနဲ့ စပ်ဆက်မှုရှိအောင် သူတို့ တင်ပြခဲ့တယ်... ဥပမာ... နောက်ဆုံးမှာ ကောင်မလေးရတဲ့စာက သီချင်းစာသားထဲက ကောင်လေးရဲ့ မပို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ သူ့ခံစားချက်တွေပါတဲ့ အချစ်ဝန်ခံစာလေးဖြစ်နေတယ်... ကောင်မလေးက တစ်ချိန်လုံးကြီး ပိုသဲကဲလွမ်းပြဆွေးပြနေစရာမလိုပဲ ပုံမှန် ဘ၀ယန္တယားထဲမှာ ကောင်လေးကို ဆွေးမြေ့မြေ့လေး စောင့်နေတယ်ဆိုတာကိုလဲ အနုညံ့ဆုံး ဖော်ပြသွားတယ်... ဒီသီချင်းတိုတိုလေးထဲမှာပဲ ကောင်မလေးရဲ့ စရိုက်ကို ကြိုးစားပြီး လူကြီးသူမ ရိုသေတတ်တဲ့ မိန်းမကောင်းလေးဆိုတာကို ပေါ်လွင်အောင်... အဖွားကြီးကို ပြုစုတာကို ပြတယ်... စားပွဲထိုးလုပ်တာကို ပြတယ်...
သူတို့ ၂ယောက်တူတူရှိနေတဲ့ အချိန်မှာလဲ တစ်ချိန်လုံးကြီး ဖက်ပြနေစရာဘာညာမလိုပဲ... အိမ်မှာတူတူ တီဗွီကြည့်တာ... ဈေးတူတူသွားဝယ်တာ... ရထားဘူတာရုံလေးမှာ တူတူထိုင်နေတာ... ထမင်းတူတူစားတာ... အိမ်နားပတ်ဝန်းကျင်က လမ်းလေးတွေ ကုန်းကျော်တံတားလေးတွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်နေတာလေးတွေကို အဖြူစင်ဆုံးပြထားတယ်... ဒီမှာ အတုယူသင့်တာက... စုံတွဲတစ်တွဲ ချစ်တယ်ဆိုတာကို ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာ... ပန်းခြံထဲမှာ ဖက်လိုက်.. ကလူအိသို့ မြူအိသို့လုပ်လိုက်... လက်တွဲပြီး ပြေးကြ... အအေးသောက်ရင်း ကြာကြည့်နဲ့ကြည့်ကြ... အတင်းကို ပြုံးဖြီးပြီး ရီပြကြ... အဲလိုမျိုးတွေ ရိုက်ပြနေမှ မဟုတ်ပါဘူး... (ဘယ်အတွဲမှလဲ အပြင်မှာ ဒီအရွယ်ကြီးတွေရောက်မှ လက်တွဲပြီး ပန်းခြံထဲမှာ မပြေးတော့ပါဘူး... ရုပ်ရှင်သဘောအရ တခါတရံလိုအပ်လို့ ရိုက်တာကိုတော့ နားလည်လို့ရပါတယ်... )
သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ အပိုင်းကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ... ကောင်မလေးရဲ့ ၀တ်ပုံစားပုံကလိုတာထက်မပိုဘူး... မိတ်ကပ်အပြင်အဆင်ကလဲ ဘာမှမရှိတဲ့အတိုင်းပဲ... ဒါကလဲ သူတို့ နိုင်ငံရဲ့ မိတ်ကပ်အဆင့်အတန်းနဲ့ ရိုက်တဲ့ စက်ပစ္စည်းကြီးတွေ... အက်ဒီတာရဲ့ Effect တွေနဲ့ ဆိုင်မယ်ထင်ပါတယ်...
ကောင်လေးကလဲ စွတ်ကျယ်အနက်ရောင်နဲ့ Rapper ပုံစံလေးဝတ်ထားပါတယ်... သူက အဲဒိသီချင်းရဲ့ တကယ့်အဆိုတော် အစစ်ပါ... အဆိုတော်ဆိုတော့ သိပ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပြနေစရာတော့ မလိုအပ်ပါဘူး... သာမာန်လေးပဲ သီချင်းဆိုပြနေပါတယ်... ဒါပေမဲ့ သူသီချင်းဆိုနေတဲ့ပုံလေးက မာန်ပါတယ်... ဈာန်ဝင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်... ၂ယောက်ကို ဆက်စပ်ပြလိုက်တော့... ကောင်လေးကလဲ ကောင်မလေးကို တကယ်ပဲလွမ်းနေတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးလေးပေးပါတယ်...
နောက်ဆုံးခန်းလေးမှာ ဖုန်းပြောတဲ့ အခန်းလေးတစ်ကွက်ပြလိုက်တဲ့အချိန်မှာ နံရံလေးကိုမှီပြီးပြောနေတဲ့ပုံက Cool ဖြစ်ပါတယ်... Cool ဖြစ်အောင်လဲ သရုပ်ဆောင်ထားတာပါ... လူကမလှရင်တော့ ဘယ် Cool ဖြစ်မလဲနော်... Body ကလဲ မိုက်... အရပ်ကလဲမိုက်ဆိုတော့ Cool ဖြစ်တာပေါ့... ဆိုလိုတာက အဆိုတော်ဆိုပြီး ခန္ဒာကိုယ်နဲ့ ရုပ်ရည်ကို ဂရုမစိုက်လို့ မရပါဘူး... အဆိုတော်လဲ Celebrity ပါပဲ... ကိုယ့်လုပ်ငန်းပိုပြီး အောင်မြင်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ အနည်းဆုံး ထိန်းလို့ရတဲ့ body ကိုထိန်းသင့်ပါတယ်...
ကင်မရာ အယူအဆလေးတစ်ခုကို သဘောကျတာကတော့... ကောင်လေးသီချင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ ဘေးတိုက်လေးတွေပဲ ရိုက်ထားပါတယ်... အတော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်... ဒါနဲ့ အဲဒိ အဆိုတော်ရဲ့ တကယ့်ရှေ့က မျက်နှာကို သိချင်လွန်းလို့ တခြား MTV တွေမှာရှာကြည့်တော့... သူက ဘေးတိုက်ကြည့်လေ ပိုကြည့်ကောင်းလေပါပဲ... တည့်တည့်ကြည့်တော့ ဘေးတိုက်မြင်ထားတုန်းကလောက် ကြည့်မကောင်းပါဘူး... ကင်မရာမန်းရဲ့ သရုပ်ဆောင်အပေါ် ဘယ်ကရိုက်ရင် လှတယ်ဆိုတဲ့ ပညာပါ...
အက်ဒီတင်းပိုင်းမှာတော့ သီချင်းလေးက အေးအေးလေးဆိုတော့... ကောင်မလေးအခန်းလေးတွေပြရင် Slow Motion လေး နည်းနည်းထည့်ထားတဲ့အတွက် စိတ်ထဲမှာ ညိမ့်ညိမ့်လေးလို့ ခံစားရပါတယ်... Youtube ကပဲ Quality မကောင်းလို့လား... သူတို့ပဲ Effect ထည့်ထားလို့လားတော့ မသိပါဘူး... ခပ်မှုန်မှုန်လေးဖြစ်နေပါတယ်... ကောင်လေးကို ပြရင် ဒီလောက်မမှုန်ဘူးလို့ ခံစားရပါတယ်... ဒါကတော့ ကျမရဲ့ အထင်ပါ.. မသေချာပါဘူး... သုံးတဲ့ ဖလင် Quality နဲ့ ဆိုင်မလားတော့ မသိပါဘူး... ကျမကလဲ အဲဒိလောက်ထိတော့ Technology မှာ Knowledge မရှိတော့ မသေချာပါဘူး... ဘာပဲပြောပြော ဒီ MTV လေးက အတုယူသင့်တဲ့ တင်ဆက်မှုလေးတစ်ခုလို့ ကျမတော့ ထင်မြင်မိပါတယ်...
Posted by mabaydar at 11:15 AM 8 comments :
Labels: song , Video , ဝေဖန်ရေး
Posted by mabaydar at 8:46 PM 10 comments :